Go’aankii maxkamadda ee Fikru Maru oo dib loo dhigey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Baaq barxadda Humlegården ee magaalada Stockholm loogu qabtay in xoriyadda loogu soo ceeliyo Fikru Maru fiid-nimadii arbacada. sawir: Henrik Montgomery/TT
Go’aankii maxkamadda ee Fikru Maru oo dib loo dhigey
La daabacay fredag 12 januari kl 08.30
Maxkamaddii ka socotay dalka Itoobiya ee lagu saarayey dhakhtarka iswiidhishka-itoobiyaanka Fikru Maru ayaa la soo gabagabeeyey, hase yeeshee dib loo dhigay go’aankii maxkamadda. Iyadoona go’aan laga filayo maxkamadda ugu horreeyn jimcada, sida ay qortay laanta idaacadda P4 Gävleborg, oo xiriir la sameeysay qareenka eedeeysanaha, Hans Bagner.
Go’aanka ayaa noqon kara sii deeyn, xukun maxkammadeed ama in dib la isaga yimaado.
Fikru Maru ayaa maxkammad lagu soo taagay dalka Itoobiya eedeeyn la xiriirta dembiga argagixisada. Isagoona xabsiga ku jiray laga soo bilaabo sannadkii 2013. Maxkamadda oo ka socota magaalada Addis Abeba ayay dusha kala socdaan saraakiisha safaaradda dalka Sweden uu dalkaasi ku leeyahay.
Maru ayaa lagu soo eedeeyey inuu ka dambeeyeykacdoon ka dhacay xabsiga, midkaasina oo sababay dab ey dhowr ruux ku geeriyoodeen. Ururrada u dooda xuquuqda bani’aadamka iyo mucaaradka ayaa shaki ka muujiyey sawirka dawladdu ka bixisay dhacdadaa.
Xukun lagu riday dhakhtar Fikru Maru